‘छ माया छपक्कै’ ले देला केकीलाई राहत? – Khabar Silo
‘छ माया छपक्कै’ ले देला केकीलाई राहत?
काठमाडौं – अभिनेत्री केकी अधिकारीले राम्रो अभिनयका कारण जस पाउँछिन् । तर, उनले अभिनय गरेका फिल्म भने सधै फ्लप हुन्छन् । यसैका कारण पनि हुनुपर्छ, केकीलाई कतिले अभागी नायिका पनि भन्छन् । राम्रो अभिनय गरेर पनि चर्चा नपाउने र हिट फिल्म दिन नसक्ने कारण केकी पनि कहिलेकाहीँ खिन्न हुन्छिन् ।
यता भोलि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ बाट भने केकी आशावादी छिन् । किनकि, यसपटक उनको टिमअप व्यावसायिक हिसाबले सफल फिल्म दिएको दीपक–दीपाको समूहसँग हुँदैछ । रिलिजअघिको मूल्याङंकनलाई आधार मान्दा यो फिल्म चल्ने पनि देखिन्छ । चलचित्रले राम्रो हाइप बनाएको छ ।
ठूलो समूहमा फिल्म पुग्ने भएकाले केकी पनि आशावादी हुनु स्वभाविक पनि हो । तर, के केकीले सोचेझैं फिल्म हिट होला? या यो फिल्मबाट फाइदा होला?यसको उत्तर त अब फिल्म रिलिजपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अहिलेका लागि भने के भन्न सकिन्छ भने केकीलाई यो फिल्मले केही राहत दिनेछ । उनले फिल्ममा अभिनय कस्तो गरेकी छिन्, त्यस आधारमा पनि दर्शकले उनको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले बनाएको क्रेजका सामुन्ने केकीलाई आफ्नो काम देखाउन चुनौती त छँदैछ । यता केकीका फ्यान पनि आशावादी छन्, यो फिल्मबाट उनको काम देख्न पाइनेछ र फ्लप फिल्म दिने नायिकाको ट्याग पनि हट्नेछ । अब केकीले कस्तो काम देखाउने हुन्, त्यसका लागि भने केही दिन प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्तो पो रहेछ हतारमा अनुष्काले विराटसँग विबाह गर्नुको कारण पछीको बास्तबिकता
एजेन्सी- बलिउडमा अत्यन्तै रुचाइएको चर्चित जोडी हो अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली । यो जोडीले लामो समय प्रेममा रहेर अचानक बिहे गरेका थिए । जति बेला दुबै जना करिअर बनाउने उत्कर्षमा थिए। जति बेला अनुष्का भर्खर २९ वर्षकी थिइन् । दुवैको विवाह भएको करिब डेढ वर्षपछि अनुष्काले चाँडै विवाह गर्नुको कारण खोलेकी छिन् । […]
Posted on February 10, 2021 Author khabar silo
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ भिडियो, काठमाडौं / नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागी आफूहरु एकसाथ रहेको बताएका छन् । दर्शकले त तपाइहरुको जोडीलाई धेरै मन पराए अनि वास्तविक जीवनमै हेर्न चाहेका छ्न नी भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा […]
गु’प्तां’ग काटेर पुरुषको ह’त्या, श्रीमती र सासू–ससुरा प’क्रा’उ
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल माघ २३ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी ०६ तारिख